पूर्वराजाले कम्मर कस्लान् ?
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार, वास्तवमा भन्ने हो भने यो सरकार वर्षदिनमै पूर्ण असफल भइसकयो । यो सरकारले जे गरेको छ, त्यो हावादारी विकासे सपनामात्र देखाएको छ । मुलुकका अत्यावश्यक संरचना, सञ्जालमा देखिएको यो सरकारको कमजोर पकडका कारण ओली सरकार अधोगतितिर लागेको छ । अर्का शक्तिशाली नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डले छास्सछुस्स र बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सरकारको कामको खुलेर आलोचना गर्न थालेपछि यो सरकारको असक्षमता उजागर भइरहेको छ ।
सरसर्ती हेर्दा मुलुकको अवस्था कति दयनीय भइसक्यो, त्यो देखिन्छ । गम्भीर विश्लेषकहरु त कहालीलाग्दो भनिरहेका छन् । राजधानीमै बम बिस्फोट हुनथालेको छ, मान्छे मार्न थालियो, कानुन व्यवस्था केही छैन भन्ने प्रष्ट भयो । पशुपति शर्माको एउटा गीतले दुई तिहाइको बहुमतको सरकार उल्टेलाजसरी ढलमलायो । पशुपति शर्माको आलोचना गर्न भ्याएका प्रधानमन्त्री यति गम्भीर आतंकबारे मुखै खोल्दैनन् । न त भ्रष्टाचार, बलात्कार हत्या, तस्करीबारे बोल्छन् । ३३ किलो सुन काण्डदेखि सनम शाक्यको हत्यालगायतले प्रमाणित गरेको छ, संघीय लोकतन्त्र शासन असफल भयो । उडन्ते, मनगढन्ते र हावादारी कुरा गरेर जनतालाई हँसाएर यो सरकार कतिञ्जेल टिक्ने ? होला, सत्तामा बसिरहने धर्म निभाएका होलान्, देश र जनतामाथि यति ठूलो घात यो सरकारले गरेको छ कि अव इनफ इज इनफ भइसक्यो । जनता चूप छन् भनेर नेताहरु अरु फुक्काफाल भइरहेछन् ।
ओली सरकार वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध छ भन्न सकिन्छ । अव सकस र असहज स्थितिमा रहेका नेपालहरु राहतका लागि एउटा सशक्त विश्वासी नेताको पछि लाग्न जरुरी छ । पूर्वराजा पनि जनताको र देशको यो बेहालत हेरेर बसिरहन नसुहाउला । जनताले आह्वान गर्ने, पूर्वराजा अघि सर्ने हो भने यो देशको हालत सुध्रिनसक्छ ।
जनता बेरोजगारी र महगीको मारमा छन् । कूशासनका सबै अवगुणहरु दिनदिनै बढिरहेका छन् । सरकार विकासका हावादारी गफ चुटेर समय खेर फालिरहेको छ । जनतामा साह्रै निराशा बढेको छ । देशले जनताले खोजेको बेलामा पनि काम गर्न नसक्ने हो भने कहिले गर्ने ?
देशले जनताले खोजेको बेलामा पनि काम गर्न नसक्ने हो भने कहिले गर्ने ?
हुन पनि एकपछि अर्को काण्डैकाण्ड र नेपाल र नेपालीको रिुद्धमा घटाइएका घटनाहरुले गर्दा पनि स्वयं ओली र उनको सरकारले नै व्यवस्था चलाउन नसकेको देखिन्छ । यो देखेर निराश जनता पूर्वराजाले केही गर्छन् कि भनेर आशा गरिरहेका छन् । यही समय हो, देशको भार तिर्ने ? पूर्वराजाले देखिने र सकृय भूमिका निर्वाह गरेर त्राण दिने ? नेपाल स्वर्गयुगमा पु¥याउँछौं भन्नेहरुले देशलाई रसातल, नर्कजस्तो पारिसके । सपना हेरेर जनता भुकुभुकु मरिरहेका छन्, देशको प्रभाव कमजोर बन्दै गएको छ । विकास होइन जनयुद्धमा लडेका लडाकुहरुको रकमदेखि वाइडवडी जहाज खरिदमा समेत डरलाग्दो भ्रष्टाचार गरिएको छ । यसमाथि संस्कृतिमाथि धावा बोल्दै होली वाइन प्रकरणमा समेत प्रधानमन्त्री नै मुछिए ।
करमाथि कर थपिएको छ, सेवाग्राहीलाई बिना घूस कुनै सेवा दिन सरकार तैयार देखिदैन । राज्य नियन्त्रणबिहीन हुनपुगेको छ । जनता अव एउटा भरपर्दो अभिभावक खोजिरहेका छन् । यही मौकामा पूर्वराजाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न कम्मर कसे, देश र जनताले स्वागत गर्नेछन्, ऐतिहासिक दायित्व पूरा हुनेछ ।